smita thapa- bold nepali model
Topic: smita thapa- bold nepali model
Author Topic: smita thapa- bold nepali model (Read 15747 times)
« on: August 29, 2015, 09:51:27 AM »
all photos deleted.
Updates at the end.
« Last Edit: January 15, 2018, 10:40:07 PM by tundikhel »
Re: smita thapa- bold nepali model
« Reply #1 on: August 29, 2015, 12:26:34 PM »
« Reply #2 on: August 30, 2015, 02:20:01 PM »
khelauna novel ko heroine ?
« Reply #3 on: September 04, 2015, 10:27:25 PM »
she strikes once again
« Reply #4 on: September 09, 2015, 11:19:16 AM »
The Original M_K returns
« Reply #5 on: November 08, 2015, 09:04:45 AM »
wow shes so busty
Jai XNepali !!!
« Reply #6 on: November 16, 2015, 04:10:10 AM »
thank you bro! More more!!!
« Reply #7 on: November 17, 2015, 07:07:12 AM »
12187770_10153042364521595_1285829960471693040_n.jpg (65.91 kB, 720x960 - viewed 340 times.)
« Reply #8 on: November 23, 2015, 01:40:47 PM »
पुरुषहरु मेरा खेलौना हुन् – स्मिता थापा
स्मिता थापा, मोडल
उनी हुन् मोडेल स्मिता थापा । मोडेल थापा यौनमा पुरुषको होइन महिलाको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छिन् । नेपाली समाजमा पुरुषहरु महिलालाई यौनेच्छा शान्त पार्ने साधनका रुपमा प्रयोग गर्छन् भन्ने पुरानो मान्यताका विरुद्ध उनी खरो रुपमा उत्रन चाहन्छिन् । उनी जस्ता धेरै महिलाका कारण नेपाली समाजमा पुरुष यौनकर्मीको संख्या बढ्दै गएको छ । त्यस्ता पुरुष प्रयोग गर्ने युवती मध्ये एक हुन् मोडल स्मिता थापा ।
पत्रकारितामा प्रकाशित हट पोज ब्लोअपमध्ये सर्वाधिक चर्चित तस्विर छपाएकी स्मिता त्यस्ता युवतीहरुकी प्रतिनिधि हुन् जो पुरुषलाई यौन साधन मात्रै मान्छन् । उनको विचारमा पुरुषले महिला माथि मायाको नाममा यौन शोषण गरेको छ । अब पालो युवतीको हो । युवतीहरुले पनि पुरुषहरुलाई यौन साथीका रुपमा मात्र हेर्न सिक्नुपर्छ ।
भनिन्छ, केही पुरुषहरु महिलालाई खेलौनाका रुपमा हेर्छन्, उनीहरु खेल्छन् र उपादेयता सकिएपछि फ्याक्छन् । के यस्तै कुरा महिलाहरु पनि सोच्छन् ?
– सोच्छन्, किन सोच्दैनन् ? म त्यस्तै युवती हुँ । पुरुषहरु मेरा खेलौना हुन् । मेरो शरीरले इच्छा गर्दा उनीहरुलाई युज गर्छु । सकिएपछि त्यसको उपादेयता पनि सकिन्छ ।
कति पुरुषसँग संगत गर्नुभयो ?
– मैले १६ वर्षदेखि पुरुषको संगत गर्दै आएकी छु । अहिलेसम्म कति पुगे होलान् भनेर गन्दा अल्मलिन्छु । धेरै पुगिसके, कति भन्नु ? (लामो हाँसो)
भनेपछि ती सबै खेलौना नै थिए ?
– पहिले त ती ड्रिम ब्वाई नै थिए । पछि–पछि मलाई पुरुष भनेका खेलौना हुन् भन्ने लाग्न थाल्यो ।
यस्तो सोच कहिलेदेखि आयो ?
पहिले शरीरको आवश्यकता पुरागर्न यौन संवन्ध राखें । कहिलेकाहीं सम्बन्ध राख्दै जाँदा त्यो मायामा परिणत भयो । जब मानिसको व्यवहार बुझ्दै जाँदा यो स्वार्थी जीव हो, यहाँ माया प्रेमको अर्थ छैन भन्ने थाहा पाएँ । त्यसयता मैले पनि पुरुषहरुलाई “युज एन्ड थ्रो” कै व्यवहार गर्न थालेकी छु ।
पुरुषहरु स्वार्थी कि महिला ?
– म महिला भएकीले महिलालाई किन स्वार्थी भनौं ? बरु पुरुष नै स्वार्थी हुन्छन् । महिलाहरु मायामा पग्लन्छन्, तर पुरुषहरु पग्लिएको मैले पाईंन । म कुनै पुरुषको मायामापर्दा उसले मलाई विवाह गरेन । मायामा पग्लिने भए त विवाह गरिहाल्थ्यो नि ।
विवाहगर्ने अनुकुल अवस्था नहुन पनि सक्छ नि, विवाह नगर्ने वित्तिकै पुरुषलाई स्वार्थी भन्न मिल्छ ?
– पुरुषहरु विवाह अघि म जस्तै हट एण्ड सेक्सी गर्लफ्रेन्ड चाहाँदा रहेछन् । गाडीमा राख्यो, घुमायो, अनि मोजमस्ती गरो । जव विवाहको कुरा आउँछ, उनहिरुलाई घर सम्हाल्ने, सिधा–सादा केटी चाहिन्छ रे ? विवाह अघि पनि गर्ने त्यही हो, पछि पनि त्यही हो । त्यसो भए व्यवहार चाहिं किन फरक ?
किनभने तपाईंहरु जस्ता युवतीहरुलाई उनीहरुले खर्च गरेका हुन्छन्, स्वार्थकै लागि संगत गरेका हुन्छन् होइन र ?
– म कर्ल गर्ल होइन । कतिपय अवस्थामा मेरै पैसावाट उनीहरुले मोज गरेका छन् । त्यस्ता युवती पनि होलान्, जसलाई खान–लाउन पुग्दैन, उनीहरुलाई त्यसरी पैसा लिनु बाध्यता पनि होला । तर, म त सम्पन्न घरकी युवती हुँ । मजस्ता खुला विचारका युवतीलाई देख्ने बित्तिकै समाजले गलत अर्थ लगाउने गर्छ । हाम्रो समाजको धारणा नै गलत छ ।
तपाईं गाडी चढ्नुहुन्छ, फ्ल्याटमा बस्नुहुन्छ, विचार र व्यवहार पनि त्यस्तै देखेपछि यस्तो सोच्नु स्वभाविक नै हो, होइन र ?
– म व्यक्तिगत जीवनमा फेमिली ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्न चाहान्न । तर यति भन्छु, म महिनाको ४–५ लाख खर्च गर्ने क्षमता राख्छु । म बीटेक गरेकी शिक्षित एवम् सक्षम युवती हुँ ।
तपाईंको जीवनको उद्धेश्य के हो ?
– राम्रो मोडल बन्ने । खुसीसाथ जीवन बिताउने । दुई–चार वटा एड (विज्ञापन) गर्दा बजारबाट जुन रेस्पोन्स पाएँ, त्यसले मलाई मोडलिङमा रुचि बढाएको छ । बाँकी जीवन आफूले चाहेको जस्तो गरी बिताउने । विशेषगरी नयाँ–नयाँ पुरुषसँग सङ्गत गर्ने ।
सवैभन्दा पहिला पुरुषको संगत गर्नुभयो कि मोडल बन्ने चाहाना राख्नु भयो ?
– म स्कूलमा फरवार्ड थिएँ । राम्रो नाच्ने र एक्टिङ गर्थे । १६ वर्षको उमेरदेखि नै पुरुषको संङ्गत पनि गर्न थालें ।
पहिलो पटक सङ्गत गरेको पुरुषको संझना छ ?
– छ । मैले डान्स क्लासमा भेटेकी हुँ । ऊ २७ वर्ष जतिको थियो । ऊसँग मेरो “ओरल सेक्स” भएको थियो ।
त्यति सानो उमेरमा कसरी ओरल सेक्सको कुरा थाहा पाउनु भयो ?
– त्यो आफैंमा थाहा पाउने कुरा हो । सेक्स त प्राक्रितिक कुरा हो नि, होइन र ? फेरि त्यो निकै अनुभवी मानिस थियो, उसले नै मलाई सेक्सको महत्व सिकाएको हो ।
त्यो एक प्रकारको शोषण थियो भन्ने लाग्दैन ?
अहिले आएर लाग्छ किनभने उसले मेरो चाहाना पुरा गर्दैनथ्यो । तर मैले ओरल गर्दा ऊ जति खुसी देखिन्थ्यो, त्यो देखेर मलाई आनन्द लाग्थ्यो ।
दोस्रो पुरुष पनि संझनु हुन्छ ?
– सम्झन्छु । त्यसवेला म १७ वर्षकी थिएँ । ऊसँग मेरो प्राकृतिक सम्पर्क भएको थियो । म पहिलो पटक साँच्चैकी युवती भएकी थिएँ । ऊ भने ३१ वर्षको थियो ।
तपाईंलाई सधैं पाको पुरुष नै मन पर्नुको कारण ?
– किनभने उनहिरु अनुभवी हुन्छन् । अर्को कुरा पाको मानिससँग उठबस गर्दा अरुले अनावश्यक शंका पनि गर्दैनन् । मेले अहिलेसम्म आफू सेफ साइडमा बसेर जीवन बिताएकी छु ।
गलत गरें कि भनेर पश्चात्ताप लागेको छैन ?
एक पल्ट ४० बर्षको पाको मानिस मलाई यति मन परो कि उसलाई फकाउने क्रममा उसको कारमै हाम्रो सम्बन्ध भएको थियो । त्यसवेला उसले मलाई के सोच्यो होला भन्ने पीर लागिरह्यो । मलाई लाग्यो, मेरो शररि आवश्यकताभन्दा बढी भोको छ । यो राम्रो कुरा होइन भन्ने लागेको थियो ।
त्यो बानी परिवर्तन भएन ?
– भएन । ऊ मबाट यति प्रभावित भयो कि मेरो लागि सबैथोक छाड्छु भन्न लाग्यो । उसको परिवार बिग्रने डरभएपछि म साइड लागें । किनभने उसका श्रीमती, छोरा–छोरी थिए । मेरो उद्धेश्य ऊसँग सम्बन्ध राख्ने मात्र थियो, परिवार बिगार्ने थिएन ।
कति समयमा तपाई केटा फेर्नु हुन्छ ?
– यति समय भन्ने छैन । एउटा पुरुषसँग सङ्गत गर्दा अरु पुरुषसँग उठबस् गर्दिन । मलाई मनै लाग्दैन । अर्को पुरुषसँग उठबस गर्दा मेरो ब्वायफ्रेन्डमाथि अन्याय भएजस्तो लाग्छ ।
यौन संवन्धमा माया–प्रेमको भूमिका हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
– माया र सेक्स फरक कुरा हुन् । तर, सेक्समा प्रेम भयो भने त्यो सुनौलो हुँदो रहेछ । नेपालीमा उखान छ नि, सुनमा सुगन्ध, प्रेम भएको अवस्थामा सेक्सको त्यही महत्व छ ।
यति लामो यौनजीवनमा कतिपटक सुनमा सुगन्ध महसुस गर्नुभयो ?
– एक पटक । केही वर्ष पहिले एकजना सञ्चारकर्मीसँग मेरो संगत भएको थियो । आफू सेफ हुन ऊसँग संगत गरेको थिएँ, तर एक वर्ष नबित्दै ऊसँग मेरो प्रेम हुन गयो । म उसको मायामा यतिधेरै पग्लिएछु कि ऊसँग मात्र तीन बर्ष संगत गरें । त्यसवेला मलाई लाग्यो, सेक्सको आनन्द प्रेममा रहेछ । तर के गर्नु उसले मसँग विवाह गर्ने मानेन ।
उसले विवाह गर्न नमान्नुको कारण के होला ?
– म उमेरले सानी भएँ रे । सङ्गत गर्दा चाहिं सानी नहुने, विवाह गर्दा चाहिं सानी हुने ? म त्यसवेला खुब रोएकी थिएँ ।
त्यसो भए विवाह गरेर लाइफ सेटल गरे भइहाल्यो नि ?
– प्रेममा उसले धोका दिएपछि प्रेमप्रति मेरो विश्वास रहेन । त्यसपछि मैले पुरुषको भावनामा बग्नुहुन्न, बरु पुरुषलाई युज चाहिं गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझें । अब मलाई लोग्ने होइन, लोग्नेमानिस चाहिन्छ ।
सधैंभरि यस्तो जीवन कसरी चल्छ ?
– मलाई थाहा छ, मोडलिङको पनि आफ्नो उमेर हुन्छ । यसरी रमाईलो गर्नुको पनि एउटा समय हुन्छ । त्यसैले धर्मपुत्री पाल्दैछु । १ करोडको लगानीमा एउटा बिजनेस सुरु गर्दै छु । आम्दामी भएको पैसाले समाजसेवा गर्छु । जसरी होस् जीवन मोजमा विताउँछु । अहिले मोडलिङमा मेरो चर्चा छ, भोली समाजसेवामा मेरो नाम रहन्छ ।
विवाह नगरेपछि आफ्नो सन्तान हुँदैन, यसले एउटा माहिलाको जीवन अपूरो भयो नि ?
– सन्तानका लागि विवाह किन गर्नु परो र ? मलाई एउटा यस्तो लोग्ने मानिस चाहिएको छ, जो हेण्डसम होस्, असल व्यवहारको होस् । उसलाई म आफ्नो सन्तानको बाबु बनाउन चाहान्छु तर त्यसमा उसको अधिकार हुनेछैन । त्यो मेरो मात्र सन्तान हुनेछ ।
अश्विनी कोइरालाको पुस्तक “उनी” बाट ।
त्रकार अश्विनी कोइरालाको पुस्तक “उनी” नेपाली महिलाका बारेमा आएको अहिलेसम्मको फरक कृति हो । विगत १७ वर्षदेखि कान्तिपुरको साप्ताहिक र नारीमा कार्यरत कोइरालाको उक्त कृतिमा रहेका ४० मध्येबाट छानिएको यो अन्तर्वार्ता । लेखक कोइराला जुकरबर्ग क्याफे नामक पुस्तक लिएर फेरि पाठक माझ आइसकेका छन् ।
uni cover.jpg (48.37 kB, 632x960 - viewed 276 times.)
Model Smita (Mid 2000's Hot Model Back)
« Reply #9 on: March 22, 2017, 08:44:03 AM »
How Many of us remember her?
wp_ss_20170321_0001.png (1913.87 kB, 1040x1337 - viewed 275 times.)
wp_ss_20170321_0004.png (1524 kB, 992x1316 - viewed 165 times.)